Incredibles၊ Mac အတွက် LEGO ဂိမ်းကိုနိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ရနိုင်သည် ငါက Mac ပါ
Incredibles၊ Mac အတွက် LEGO ဂိမ်းကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ရနိုင်သည်
ယခုအချိန်တွင် Parr မိသားစုကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအားလုံးသည် Disney Pixar ဇာတ်ကားနှစ်ခုဖြစ်သော The Incredibles နှင့် The Incredibles2တို့မှအကြောင်းအရာများပါဝင်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သောဂိမ်းကိုစတင်ရန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီ macOS ။ ပြီးတော့မသိသေးတဲ့သူတွေဟာအခုသူတို့လွှတ်တင်တဲ့နေ့ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်လို့၊ လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ 21.
ဤဂိမ်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်သူတို့၏မိသားစုဘဝကိုတိုက်ဖျက်သောထူးခြားသည့်မိသားစု၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြမည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဂိမ်းဂိမ်း၏အရေးယူမှု, ဇာတ်ကောင်များနှင့်သူတို့အား၏စာနာမှုအပြင်ရှိပါတယ် ငါတို့ရုပ်ရှင်များတွင်ပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ဖူးဟာသထိ.
ဒါကဖြစ်ပါသည် တင်ဆက်မှုနောက်တွဲယာဉ် Youtube ၌ဤဂိမ်း၏:
Municiberg မြို့ပါ ၀ င်သောကမ္ဘာကြီးတွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုထုပ်ပိုးထားသောအဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာ Supillain များကိုအရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်တွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Jack-Jack ရဲ့ရူးသွပ်မှုစွမ်းအားတွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးကစားသမား ၂ ယောက်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင် LEGO အဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဤဂိမ်းသည်အဓိကဂိမ်းအသစ်များဖြစ်သည်။
အဖြစ်မကြာမီသူတို့ကဲ့သို့ပိုပြီးဒေတာပြသအဖြစ် စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ / လိုအပ်ချက်များ ကစားနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမင်းနဲ့အတူတူမျှဝေမယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Incredibles၊ Mac အတွက် LEGO ဂိမ်းကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ရနိုင်သည်
Desktops များကို Mac ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာမည်သို့ရွှေ့မည်နည်း